US ichabhadhara rini mamiriro ekunze pamabhomba iwaya avanokanda? : Martin Vrijland
US ichabhadhara rini mamiriro ekunze pamabhomba iwaya avanokanda?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we11 September 2019	• 2 Comments
Zvinoshungurudza kwazvo mazwi kuona nzira iyo US ichiramba ichiparadzira mabhomba ayo nekusazvibata uku huwandu hwenyika pasi pekupokana kwenhema "kudziya kwepasirese nekuda kweakanyanya CO2 mumhepo'akapihwa mutero wakakwira. Rizere nokudada the telegraaf mangwanani ano mauto emweya weCombined Joint Task Force (iyo inosanganisirawo neNetherlands) yaizoputika chitsuwa muIraq nematani anopfuura matani e40. Varwi vechi IS vaizovanda pachitsuwa.
Isu tiri pano zvakare kupupurira yako chaiyo chena kusarudzika uye manyepedzero manyepo nhau, kupa fungidziro kuti kuchiri kurwa neaya akazvigadzira IS proxy mauto ayo aidiwa kwazvo kuhondo sham muSyria. Hondo iyoyo muSyria yaifanirwa kupinza hukama padanho rekupokana kwepasi rose pakati pevasimbe. Iwe neni tinofanirwa kuramba tichitenda kuti nyika dzinorwisana, kuti isu tirambe tichitenda mukuita kumashure kwescript script inoitika.
Chii icho 'master script' ipapo? Iyo script inoenderana ne polarity kana, nemamwe mazwi, mbiri. Icho chidimbu chinotevera chiporofita chechitendero, umo vatungamiriri vezvematongerwo enyika uye avo vari pasi pemireza nyika vakananga kuhondo huru yekupedzisira yenyika. Hondo yekupedzisira yenyika iyoyo inofanira kunge iri yeJerusarema. Ehe izvi hazvizoitika nekukurumidza mangwana, nekuti kana iwe ukatanga kuona kuburikidza nescript, iwe unogona kuona kuti humambo hukuru hweIslam huchatanga kumirira izvi. Kuongorora kwangu kwemakore kwakatungamira kumhedziso yekuti iyi ingangove yeOttoman Humambo. Humambo hweOttoman hunogona kunge hwakapora mu2023, nekutora kweTurkey kweEU kunoenderana nekutarisira. Ndinokupa zano mune izvo mamiriro ichi chinyorwa Riverenge zvakakwana, nekuti ini ndinotsanangudza zvakadzama tarisiro iyi. Hondo muSyria yakapa mauto eTurkey nzvimbo yakanaka yekudzidzira kune ese zvombo zvinyowani uye yakaratidzawo nzira yekutanga bvudzi mitsetse (kana kuti panzvimbo: makatekete) akaoneka muhukama pakati peUS neTurkey.
IS ndiye muvengi akazvigadzira uyo aidikanwa muhondo iyi umo marudzi ese ezvombo zvitsva anogona kuedzwa uye kupi zviratidzo zvemunyori tenzi zvakauya pamusoro. Turkey ndiyo nyika inosimuka uye US ndiyo huru yeZionist empire iri kuderera. Izvo hazvizove nguva refu pamberi peAmerican hegemony, iyo inonyanya kuve yakanangana nedhora uye hukuru hwemauto, inosvika kumagumo. Uye apo munhu wese anotarisa muhondo yekutengeserana pakati peUS neChina uye mhedzisiro yeizvi muhondo yemuviri, Turkey inowana mukana wekusimbisa hunyanzvi hwemauto-maindasitiri apo munhu wese akatarisa hofori mbiri dzekurwira. Hondo muSyria yakapa Turkey, nekuwedzera kuyedza simba rayo rekurwisa muNorth Syria, chombo che'yo hupoteri crane ', iyo inogona (uye ichiri inogona) kumanikidza EU.
In ichi chinyorwa kubva Brandon Smit iwe unogona kuverenga kumashure iyo kurwa pakati peUS neChina zvakare chikamu cheiyo master script. Masimba ese epasi rose anoshanda kuburikidza negwaro rezvimisikidzo zvehondo uye "kupokana kwakasimba mumunda unooneka," muchivande pane imwecheteyo chinangwa nemhedzisiro yehurumende yenyika iyo ichamuka kubva mumhirizhonga yehondo yenyika yekupedzisira. Kudzoserwa kunotarisirwa kweHurumende yeOttoman, saka, kuchave kwenguva pfupi uye kungobatsira panjodzi dzepasi rose dzichagadzirwa kubudikidza nehondo yenyika iyi yechitatu.
Izvi zvataurwa pamusoro zvinogona chete kunyatsonzwisiswa kana iwe chaizvo ukaverenga zvinyorwa zviri pasi pebhuruu zvinongedzo.
Source chinyorwa listings: telegraaf.nl, alt-market.com
Boris Johnson (madzitateguru aOttoman) anogona kutanga nyonganiso muEurope iyo ichasimudza Humambo hweOttoman?
Iyo Brexit nyaya inogara yakave chirongwa chakatemerwa
Tags: 40, mabhomba, Yakasanganiswa Joint Task Force, Europe, is, air force, Nederland, rira, VS
Zvinosuruvarisa asi ndizvo zvakajairwa uye zvese izvo
pasi pezita reDziviriro
kana zvakare inonzi Global kuchengetedzeka
Chikepe chakashama chinongoshandisa 200 matani emafuta (= 200.000 malita) pazuva, dzimwe nguva kunyange.
Unogona kutarisa izvo Anotakura ndege inodya pazuva, kunyangwe iwo achingova zvishoma pane
kudzidzira. ona pasi pezvikepe nezvimwe
Isu tinongokanda mune new calculation modhi uye ipapo zvese zviri nani. Ipapo isu tine chokwadi chitsva, chokwadi kana chaicho ... Sarudzo ndeyako!
« NOS uye RTL inopa kutarisisa kuzere kwakadzika kudzikisa zvigadzirwa zvavo zvakadzama
Ko 911 raive basa remukati? De Telegraaf ine mhinduro kumibvunzo yako yose! »
Total Visits: 12.372.483